Samachar Batika || News from Nepal » कुन देशका पुरूषकाे लिं’ग कति लामाे हुन्छ ? पढाैं सूची
कुन देशका पुरूषकाे लिं’ग कति लामाे हुन्छ ? पढाैं सूची
पुरुषको लिं’गलाई लिएर विभित्र देशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेका हुन्छन् । यसको आ’कार र प्रकारको विषयमा पनि विशेष चासो राखेको देखिन्छ । विशेष गरी यौ न स’न्तुष्टीमा आकारले फरक पार्छ भन्ने भ्रम पनि फैलिरहेको पाइन्छ । आकारले भने जीवनलाई कुनै प्र’भाव पार्दैन ।
यसको आकारलाई लिएर बेला बेलामा चर्चा परिचर्चा भने भइरहन्छ । आकार देश, वर्ण आदि अनुसार फरक फरक हुन्छ । विश्वका विभिन्न मानिसहरूको वर्ण तथा रहनसहन फरक फरक छ । सोही अनुसार तपाईलाई कौ’तुहलता हुन सक्छ कुन देशका पुरुषको लिं’गको आकार कति हुन्छ भनेर । तपाईको यो कौतुहलता हामीले केही ह’दसम्म भने पनि मेटाउने प्रयास गरेका छौँ ।
विश्वका पुरुषहरूको औसत लम्बाई
* कङगो –७.१ इन्च, इक्वाडोर – ७ इन्च, घाना – ६.८ इन्च,
* कोलम्बिया – ६.७ इन्च, इटाली – ६.२ इन्च, दक्षिण अफ्रिका – ६ इन्च, स्वीडन – ५.९ इन्च,
* ग्रीस – ५.८ इन्च, जर्मनी – ५.७ इन्च, न्युजिल्याण्ड – ५.५ इन्च, ब्रिटेन – ५.५ इन्च,
* क्यानडा – ५.५ इन्च, स्पेन – ५.५ इन्च, फ्रान्स – ५.५ इन्च, अस्ट्रेलिया – ५.२ इन्च,
* रूस – ५.२ इन्च, यूएसए – ५.१ इन्च, आयरल्याण्ड – ५ इन्च, रोमानिया – ५ इन्च,
नेपाल – ४.५ इन्च,
* चीन – ४.३ इन्च, भारत – ४ इन्च, थाइलैंण्ड – ४ इन्च, दक्षिण कोरिया – ३.८ इन्च, उत्तर कोरिया – ३.८ इन्च
आकार देश, वर्ण आदि अनुसार फरक फरक हुन्छ । विश्वका विभिन्न मानिसहरूको वर्ण तथा रहनसहन फरक फरक छ । सोही अनुसार तपाईलाई कौ’तुहलता हुन सक्छ कुन देशका पुरुषको लिं’गको आकार कति हुन्छ भनेर । तपाईको यो कौतुहलता हामीले केही ह’दसम्म भने पनि मेटाउने प्रयास माथी गरीसक्यौ ।
प्रकाशित मिति २१ चैत्र २०७६, शुक्रबार १५:०४